Cadaado: Dhismaha Taliska Qeybta 21aad oo la bilaabay (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Cadaado: Dhismaha Taliska Qeybta 21aad oo la bilaabay (Sawirro)
Cadaado: Dhismaha Taliska Qeybta 21aad oo la bilaabay (Sawirro)
January 27, 2019 January 27, 2019 admin488
Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo kaahshanaya Bulshada iyo Maamulka degmada Cadaado ayaa bilaabaay Dhismaha Xerada cusub ee Taliska Qaybta 21aad taasi oo maalmo kohor laga dhagax dhigey Duleedka waqooyi ee Magaalada Cadaado.
Qaar ka mid ah Agabka dhismaha ayay Maamulka Dagmada Cadaado iyo waxgaradkoodu ku wareejiyeen Taliska Qaybta 21aad si loo dadajiyo dhismaha Xerada waxaana ka gudoomey Taliyaha Qaybta 21aad S/Guuto Yuusuf Maxamed Cabdilqaadir “Kaanti”.
Injineerada dhismaha Ayaa durbadiiba Diyaariyey Wareega Carotuurka ee Xerada iyagoo sidoo kale uu barbar socdo Dhismaha Darbiga xerada sida idiin muuqataba.
Taliyaha Qaybta 21aad S/Guuto Yuusuf Maxamed Cabdilqaadir ayaa tilmaamey in maanta ay kormeereen Shaqada dhismaha isagoo reer Cadaado uga mahadnaqey Howsha socoto iyo Kaalinta ay ka qaadanayaan.
Taliyaha Qeybta ayaa dhawaan ka codsaday Maamulka Degmada Cadaado in ay siiyaan dhul laga dhiso Taliska Qeybta Madaama muddo 4 sano ah ay ku shaqeynayeen guryo iyo dhulal gaar loo leeyahay, sidoo kale dhismahaan ayaa waxaa soo dadajiyey markii Talisku ay ku adkaatay in ay helaan Taliskooda rasmiga ah ee ku yaalay Caasimadda Dusmoreeb, halkaas oo ay gacanta ku hayaan ururka Ahlu Sunna.
Alshabaab oo soo bandhigay gaari gaashaaman oo ay qabsadeen (Sawirro)
Farmaajo oo Garowe kula kulmay Madaxda Maamulada
January 1, 2017 Duceysane
Madaxweynaha JFS oo u hambalyeeyay Galmudug iyo H/shabeelle oo soo dhameeystiray doorashooyinka